Lama Qaadayo xukunka deg dega ah ee dalka saaran” Xayle Maryan. | ogaden24
Lama Qaadayo xukunka deg dega ah ee dalka saaran” Xayle Maryan.
Ra’iisal wasaaraha maqaar saarka ah ee maamulka Woyanaha ayaa shaaciyay inuu sii soconayo xukunka deg dega ah ee kooxda TPLF kusoo Rogtay dalkaasi mudo haatan 3-bilood iyo siyaado laga Joogo.
Xayle Maryan oo lahadlayay warbaahinta Woyanaha ayaa sheegay in Qaadista xaalada deg dega ahi ay kuxidhan tahay xaalada dalka, waxaana uu sheegay in marka la Gaadho Hubanti dhinaca Amaanka ah laqaadayo xukunka deg dega ah oo uu sheegay in Faa’iidoyin badan laga dhaxlay.
Intii uu socday xukunka deg dega ah ayaa waxaa xabsiyada loo Taxaabay dad kabadan 100-kun oo shacab ah kuwaasi oo intooda badan laga kala xidh xidhay maamulada Oromada iyo Amxarada oo xudun u ah kacdoonka looga soo Horjeedo Hogaanka kooxda cunsuriga ah ee TPLF.
Siraj Fegase oo ah Gudomiyaha Gudiga lasocodka xukunka deg dega ah iyo kooxdiisa ayaa horay u sheegay in xaalada dalku kasoo Raynayso, kadib markii sida ay sheegeen Gacan Bir ah lagu Qabtay kacdoon wadayaasha, balse warkaasi ayaa ah mid sida ay u sheegeen aan u jirin waxaana meelo badan oo dalkaasi kamid ah kasocda kacdoon iyo dagaalo looga soo Horjeedo Taliska Woyanah.
Dhawaaqa Xayle Maryan ayaa kusoo Hagaagaya xili war kasoo baxay safaarada Maraykanka ee magaalada Addis ababa loogaga digay muwaadiniinta Maraykanka ah inaysan ku dhex socdaali karin Gudaha dalkaasi, gaar ahaan maamulka Xabashida oo warka lagu sheegay inuusan wax Amaan ahi kajirin.